Oracle Linux 7.3 yave kuwanikwa kune wese munhu | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura takasangana neshanduro nyowani yeRedHat Linux, vhezheni yaive yakatarisana nenyika yebhizimusi uye pamusoro pazvo zvese pasirese yenyika Zvinonzwisisika, mwanasikana kugoverwa kweRedHat Linux inotevera iyi imwechete musika mutsetse, OracleLinux 7.3, vhezheni ichangobaya mumigwagwa uye ine zvese nhau kubva kuRedHat asi kune veruzhinji uye zvemahara.
Oracle Linux 7.3 inowanikwa kubva yavo webhusaiti uye ndipo pavari zvemahara yekuisa mifananidzo ye32-bit uye 64-bit makomputa, kunyangwe iyo yekupedzisira ichinyanya kukosha kana isu tichinyatsoishandisa kuseva
Oracle Linux 7.3 inosanganisira Unbreakeble Enterprise Kernel tekinoroji, tekinoroji inobatsira uye kugadzirisa iyo inoshanda system kernel kuitira kuti ishande zvisina mhosho uye inogona kuvandudzwa pasina kunetsa bugs. Iyi vhezheni yekernel, yakafanana neRedHat Linux, inotsigira UEFI bios uye Yakachengeteka Boot. Maviri ezvinyowani zvekukonzeresa kwedambudziko kune mazhinji madistros, asi paOracle Linux zvinoita kunge iine iyo iri pasi pesimba
Oracle Linux 7.3 inosanganisa yazvino Redhat Linux matekinoroji
Zvakare, kana isu tisingade ino kernel, Oracle Linux 7.3 ine imwe mhando yekernel inonzi Red Hat Inoenderana Kernel iyo ingave isiri yepamutemo kernel kubva kune iyo yakaburitswa neRedHat Linux, saka tinogona kuva neRedHat Linux kernel pasina kuyedza kukuru. Izvi zvakakosha sezvo isingangopa zvakafanana neRedHat Linux asiwo zvinoita kuti kufamba pakati pemasisitimu anoshanda kuve nyore.
Zvinyorwa zvekuburitsa zvine iyi ruzivo uye zvimwe zvishoma, chimwe chinhu chisingandishamise ini Oracle Linux iri vhezheni yakatsaurirwa kune nyika ye server uye nekambani uko kuchengetedzwa kwakakosha kupfuura yazvino vhezheni yedesktop kana yakatarwa desktop. Chero zvazvingaitika, sezvaunonyatso ziva, pane mashoma eGnu / Linux migove isingangotarise chete pane kuchengetedzeka uye bhizinesi renyika asiwo pamatafura nezvimwe zvishandiso zvinonakidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Oracle Linux 7.3 yave kuwanikwa kune wese munhu